Izindaba - I-19th Beijing Analysis And Testing Academic Report And Exhibition
Easy Layisha Pump Shona YZ15 / 25
Inhloko yePompo Yokulayisha Ngokushesha
I-Pump elula yekhanda JY15
Okujwayelekile BZ15 / 25
I-OEM Peristaltic Pump
Ngaphandle kweMoto Drayivu
Iphampu eyi-Basic Peristaltic
Ukuhambisa iPeristaltic Pump
I-Ex-Proof Peristaltic Pump
Flow Rate Peristaltic Pump
Uhlelo Lokugcwalisa Iphampu ye-Peristaltic
Isikrini Pump Peristaltic Pump
Ukugcwalisa Uketshezi Futhi Umshini Wokufaka uphawu
I-Industrial Syringe Pump
I-Laboratory Syringe Pump
Iphampu ye-Micro Plunger
I-19 Beijing Ukuhlaziywa Nokuhlola Umbiko Wezemfundo Nombukiso
UHuiyu fluid waya e-BCEIA2019 futhi uzoya e-BCEIA2021 eBeijing. . Vakashela idokodo likaHuiyu, 6A011 #, ukuze ufunde ngesampula yokusebenza kweNkampani iPeristaltic Pump eyenzelwe ukwelashwa kwamanzi, ilabhorethri, ucwaningo lwesayensi kanye nezicelo.
Ngaphezu kwalokho, woza uvakashele idokodo lethu ukuze uthole eminye imininingwane. Sizokunikeza ukubuka konke ukuthi isampula likaHuiyu lisebenza kanjani futhi sichaze ukuthi zingasetshenziswa kanjani kuzinhlelo zokusebenza ezivamile kusetshenziswa izindlela ezinhle ezithuthukisiwe ngokususelwa kulwazi lweNkampani.
Ngakho-ke, hamba uye ku-booth # 6A011 bese uthi sawubona ku-huiyu!
Ixhaswe yiCAIA (China Association for Instrumental Analysis), ingqungquthela yaseBeijing ne-Exhibition on Instrumental Analysis (BCEIA) ingqungquthela nombukiso wezinsimbi zomhlaba wonke ohlonishwa kakhulu futhi ohlonishwayo eChina. Ngemuva kokubanjelwa nokukhuliswa ngaphezu kweminyaka engama-30, i-BCEIA iya ngokuya yaziwa kakhulu emhlabeni wonke, kunababonisi nabahlanganyeli abavela emazweni angaphezu kwama-20 kanye nama-30 ngokulandelana, ukubamba iqhaza emcimbini omkhulu oba minyaka yonke. Inani lababambe iqhaza lenyuke kancane kancane kwathi ngonyaka wezi-2017 isibalo sababambiqhaza ababhalisiwe seqa ama-25,000, kwathi ochwepheshe ababhalisiwe benkomfa yezemfundo bafinyelela ku-3 400.
Isebenza njengengxenyekazi yokukhombisa ubuchwepheshe obusha, izinsimbi ezintsha nemishini emisha, Umbukiso we-BCEIA ubulokhu uheha intshisekelo yomhlaba kusuka kochwepheshe, izifundiswa kanye nabasebenzi besayensi nobuchwepheshe. Eminyakeni yamuva nje, kuye kwaboniswa futhi kwavezwa isilinganiso semishini emisha engaphezu kwezi-3 000 kuMbukiso ngamunye esikhathini esedlule. Ababonisi baxhumana nabahlanganyeli mathupha emiqondweni yokuhlaziywa kwezinsimbi ezithuthukile, imikhiqizo nobuchwepheshe kanye nezixazululo.
Ingqungquthela yezemfundo iyingxenye ebalulekile neyingxenye ye-BCEIA, futhi ibilokhu izinikele njalo ekuthuthukiseni ubuchwepheshe besayensi obunqenqemeni. Le ngqungquthela manje iqukethe inkulumo ephelele, izikhathi eziyishumi ezihambisanayo, izinkundla zokuhlangana kanye nemihlangano kanyekanye. Ingqungquthela inezinhlobonhlobo zezihloko ezibandakanya izingxoxo ngemigomo emisha, izindlela nobuchwepheshe.
Ingqungquthela yezemfundo ingumbuthano ohloniphekile wabachwepheshe abahlonishwa kakhulu kulo mkhakha. Ochwepheshe abavela ezifundweni nasezikhungweni ezidume umhlaba wonke banikeze izinkulumo ngezihloko eziphikiswana kakhulu emkhakheni wokuhlaziya.
Le ngqungquthela inedumela elihle futhi idlala indima ebalulekile ekukhuthazeni ukushintshana kwezesayensi nobuchwepheshe bamazwe omhlaba kanye nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokuhlaziya besayensi nobuchwepheshe eChina.
"I-Analytical Science Idala Ikusasa", uhlanganyele nathi engqungqutheleni yezemfundo ye-BCEIA bese uthola ugqozi!
Isikhathi Iposi: Feb-04-2021
Kusukela yasungulwa, imboni yethu ibilokhu ithuthukisa imikhiqizo esezingeni lomhlaba yokuqala ngokunamathela esimisweni
wekhwalithi kuqala. Imikhiqizo yethu izuze idumela elihle kakhulu embonini futhi ithembekile phakathi kwamakhasimende amasha namadala ..
Igumbi1006,10th floor, building3, Zhong He Road NO. 1, Isifunda saseFeng Tai, eBeijing, eChina